१२ वर्षका दाईको विवाह १२ वर्षकी बहिनीसँग बाबुले नै टिकाटालो गरिदिए!! – News Nepali Dainik
१२ वर्षका दाईको विवाह १२ वर्षकी बहिनीसँग बाबुले नै टिकाटालो गरिदिए!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ०१, २०७७ समय: १५:१५:०२
यो कलियुग हो । यहाँ नसोंचेकै प्राय घटनाहरु हाम्रै समाजमा घटि नै रहेका हुन्छन् । कतिपय घटनाहरु विश्व परिचित हुन्छन् । जुन घटनाको बारेमा हामीले सन्दा त्यो हामीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो नेपाली समाजमा स्वीकार गर्नै गाह्रो कुराहरु अन्य मुलकमा सजिलै स्वीकार गरिएको हुन्छ ।
डेलमेलको एक रिपोर्ट अनुसार मिस्रमा एक १२ वर्षका केटाको आफ्नै नाताकी सानो बहिनीसँग माया बसेको हो । छोरा छोरीलाई सम्झाउनुको सट्टा बाबु आमा नै विवाहको तयारीमा लागेका छन् । उनीहरु नातेदार हुन्उ । उनीहरुबीच विवाह गर्न मिल्दैनथ्यो । तैपनि परिवारले बच्चाको इच्छा पुरा गर्ने भन्दै ती दाजुबहीनीको विबाहलाई स्वीकृति दिएका हुन् । केही समाजिक सञ्जालहरुले यो विवाहको विरोध गरीरहेका छन् ।
Last Updated on: February 13th, 2021 at 3:15 pm